Izinqolobane Ze-Internet Glossary - 192.168.8.1
Bheka Amandla Esiginali ye-WiFi - Uma inetha lakho libukeka lihamba kancane noma amakhasi wewebhu ngeke alayishe, inkinga ingase ibe isixhumanisi sakho se-Wi-Fi. Mhlawumbe ukude kakhulu nedivayisi, noma ukwahlukaniswa okujiyile kuvimbela isignali. Vele uhlole amandla wakho wesiginali we-Wi-Fi.
Kungani Amandla Esiginali we-WiFi enza umehluko
Isiginali enamandla ye-Wi-Fi ikhombisa ukuxhumana okuthembeke kakhudlwana. Lokhu kukwenza ukwazi ukuthatha inzuzo ephelele yejubane le-inthanethi olitholakala kuwe. Amandla esignali we-Wi-Fi ancike ezintweni ezahlukahlukene, ngokwesibonelo ukuthi ukude kangakanani ne-router, noma ngabe ukuxhumana kwe-5ghz noma i-2.4, nohlobo lwezindonga eziseduze kwakho. Lapho useduze kwakho ku-router, kuphephe kakhudlwana. Njengoba ukuxhumana kwe-2.4ghz kuqhubeka nokusakaza, bangaba nezinkinga zokuphazamiseka. Izindonga ezijiyile ezenziwe ngezinto eziminyene (njengokhonkolo) zizovimbela isignali ye-Wi-Fi. Isiginali ebuthakathaka, esikhundleni salokho, iholela kusivinini esisheshayo, ukuyeka isikole, nasezimeni ezimbalwa 'zokumiswa okuphelele.
Akuyona inkinga ngayinye yokuxhuma kungumphumela wamandla esignali ebuthakathaka. Uma inetha efonini noma kuthebhulethi yakho lihamba kancane, qala ngokuqala kabusha i-router uma ukwazi ukuyifinyelela. Uma inkinga iqhubeka, isinyathelo esilandelayo ukuqinisekisa ukuthi ngabe i-Wi-Fi iyinkinga. Zama ukusebenzisa i-inthanethi ngethuluzi elixhunywe nge-Ethernet. Noma kunjalo uma unezinkinga, inethiwekhi iyinkinga. Uma isixhumanisi se-Ethernet silungile futhi ukusetha kabusha i-router kungasizanga, sekuyisikhathi sokubheka amandla esignali.
Sebenzisa Insiza Yesistimu Yokusebenza Eyakhelwe ngaphakathi
I-Microsoft Windows nezinye izinhlelo zokusebenza ziqukethe insiza eyakhelwe ngaphakathi yokuqapha ukuxhumana kwenethiwekhi okungenantambo. Le yindlela esheshayo futhi elula yokukala amandla we-Wi-Fi.
Ezinguqulweni ezintsha zeWindows, khetha isithonjana senethiwekhi kubha yomsebenzi ukuze ubone inethiwekhi engenantambo oxhunywe kuyo. Kunemigoqo emihlanu ekhombisa amandla esignali wokuxhuma, lapho ukuxhumana okungampofu kakhulu futhi emihlanu ingcono kakhulu.
Usebenzisa i-Tabletor Smartphone
Enye idivayisi yeselula ekwazi ukusebenza nge-inthanethi ineyunithi kuzilungiselelo ezibonisa amandla wamanethiwekhi e-Wi-Fi ebangeni. Isibonelo, ku-iPhone, iya kuhlelo lokusebenza lwe-Amasethingi, manje vakashela i-Wi-Fi ukubuka amandla wenethiwekhi ye-Wi-Fi okukhona namandla wesiginali wenethiwekhi esezingeni.
Iya ku-Utility Programme yama-Adapter wakho angenantambo
Bambalwa abakhiqizi be-wireless network hardware noma ama-PC wokubhala anikezela ngezinhlelo zokusebenza zesoftware ezihlola amandla wesiginali angenantambo. Izinhlelo zokusebenza ezinjalo zazisa amandla wesiginali nekhwalithi ngokuya ngesilinganiso esivela ku-0 kuye ku-100 wamaphesenti nemininingwane eyengeziwe eyenzelwe ngokukhethekile i-hardware.
Uhlelo lokuthola i-Wi-Fi luyindlela eyodwa yokukhetha
Idivayisi yesistimu yokuthola i-Wi-Fi ihlola amaza omsakazo endaweni engomakhelwane bese ithola amandla esignali okusondela ngamaphuzu okungena angenantambo. I-Wi-Fi detector sexist ngesimo samadivayisi amancane we-Hardware ahambelana nochungechunge lokhiye.
Iningi lesistimu yokuthola i-Wi-Fi isebenzisa isethi ephakathi kwama-4 no-6 ama-LED ukuphakamisa amandla esiginali kumayunithi emigoqo efana neWindows utility. Hhayi njengezindlela ezingenhla, kepha amadivayisi wesistimu yokuthola i-Wi-Fi awalinganisi amandla oxhumano kepha asendaweni yawo, vele ubikezele amandla woxhumano.
Izigaba I-Glossary ye-Intanethi Shiya amazwana
Abasebenzisi be-Blacklist / Vimba abasebenzisi be-WiFi - Noma uvikelekile ngochungechunge lwama-alfabhethi noma izincwadi noma zombili, kungenzeka ukuthi njengesikhulumi ungangena ehhovisi lakho noma kwinethiwekhi ye-WiFi yasekhaya. Kungenzeka umuntu ongamazi ubhontshisi, odlulayo noma umakhelwane wakho, kodwa noma ngabe ngubani, kubalulekile ukwazi ukuthi ungathola kanjani lapho igajethi engekho emthethweni noma engaziwa ixhunywe kunethiwekhi yakho ye-Wi-Fi futhi ekugcineni, ikhawulele ukungena kwabo futhi ubavimbele.
Futhi lapho kuguqulwa iphasiwedi yakho yomzila kuyindlela engcono yokuvimbela ukufinyelela kwegajethi engaziwa, kuyakhathaza futhi kukhiqize okuthile. Akunasiqiniseko sokuthi i-stalker ngeke 'iqhekeze' iphasiwedi yakamuva iphinde ithole ukungena kwinethiwekhi yakho.
Ngezansi kohlu kunezindlela ezimbalwa ezinokwethenjelwa zokuthola futhi vimba umuntu noma amagajethi kunethiwekhi yakho ye-Wi-Fi ngaphandle kokushintsha iphasiwedi yomzila wakho.
1. Ukuhlunga Ikheli le-MAC elingenantambo
Ukuhlunga kwe-MAC kusiza Ukuvimba Abasebenzisi be-WiFi amagajethi angagunyaziwe ukuxhuma kwi-Wi-Fi yakho, inethiwekhi Ikheli le-MAC liyinombolo ye-ID (yehadiwe) ethola yonke idivayisi kunethiwekhi. Ikheli le-MAC likhiqizwa ekhadini ngalinye lenethiwekhi futhi awekho ama-2gadgets emhlabeni angaba nekheli elifanayo le-MAC.
Ngakho-ke ngokusebenzisa idivayisi yekheli le-MAC, ungahle u-ode ngokuzenzakalela umzila wakho uvumele noma wenqabe ukungena kwedivayisi kunethiwekhi.
Ukuze wenze lokhu, ngena ngemvume kuphaneli lokulawula ukungena kwe-router
Ngaphansi kwesigaba se-WLAN noma se-Wireless kukhonsoli, kufanele ubuke ukukhetha kokuhlunga kwe-MAC.
Uma kungasebenzi, shintsha isimo sokuhlunga se-MAC siye kokuthi 'Kuvunyelwe'
Okulandelayo engeza amadivayisi ohlwini lwakho lwekheli le-MAC bese ukhetha ukuthi ufisa ukuhoxisa noma uvumele ukungena kwawo kunethiwekhi yomzila wakho.
2. Uhlu lwabamnyama oluqondile
Ambalwa amarutha we-WiFi avumela amaklayenti ukuthi avimbele amagajethi angaziwa ngokuwafaka kuhlu lwabamnyama ngokucindezela kokhiye. Lokhu kwehluka kanye nemikhiqizo yama-router kepha ungahle ungeze amadivayisi kuhlu lwabamnyama lomzila wakho ngaphansi kwesigaba esithi 'Ukuphathwa Kwedivayisi' sephaneli yakho yokungena / iphaneli yokulawula noma yisiphi isigaba esivele sibala wonke amagajethi axhunywe ku-router yakho. Lapho uzothola ukhiye weklayenti "ovimba" noma okuthile ngokufanayo.
I-3. Izinhlelo Zamaselula
Uma ufuna indlela eyimfihlo futhi elula yokwenza i- vimba amagajethi angaziwa kusuka kunethiwekhi yakho ye-WiFi, kunamadivayisi wenethiwekhi yomuntu wesithathu osebenzayo ongawaxhuma kudivayisi yakho esikhundleni sokungena ngemvume kuphaneli yokulawula i-router. Isibonelo i-FING, iyatholakala kumadivayisi we-iOS ne-Android futhi ikunikeza ukukhetha kokukhetha kokuvumela abasebenzisi ukuthi:
Vimba ama-stalkers namathuluzi angaziwa, ngisho nangaphambilini ayexhumeka kunethiwekhi yakho
Ikuthumelela izexwayiso uma ithuluzi elisha likunethiwekhi yakho; ukumane uqaphele abahlaseli (s)
Buka uhlu lwezinto ezihlukile / zamadivayisi ngenethiwekhi yakho
Thola ukutholwa kwedivayisi okulungile kwekheli le-IP, imodeli, ikheli le-MAC, igama ledivayisi, umthengisi nomkhiqizi.
Thola izexwayiso zedivayisi nokuphepha kwenethiwekhi ku-imeyili nakucingo lwakho
Kungakhathalekile ukuthi igajethi ixhunyaniswe kanjani nenethiwekhi ye-WiFi, ungabavimba nganoma iyiphi yezindlela ezi-3 ezingenhla ngaphandle kokushintsha iphasiwedi yakho.Kuhlakaniphile ukuhlala uqinisekisa ukuthi amagajethi ahlonishwayo nje axhumanisa namanethiwekhi wakho we-WiFi.
I-hotspot ye-WiFi zingamaphoyinti okufinyelela okuvumela ukuthi uxhume kunethiwekhi ye-WiFi ne-PC yakho, i-smartphone noma elinye ithuluzi uma ungekho ehhovisi lakho noma kunethiwekhi yasekhaya.
Amabhizinisi amaningi, amadolobha, nezinye izikhungo seziqalile ukwethula i-WiFi hotspot lokho kusiza abantu ukuthi baxhumeke ekuxhumekeni okuqinile, okusheshayo kwe-inthanethi okushesha kakhulu kunamanethiwekhi weselula angenantambo.
Noma kunjalo iyini i-hotspot ye-WiFi nokuthi isebenza kanjani? Ingabe izindawo ezidla lubi ziphephile? Funda yonke imininingwane oyifunayo ngezansi.
Isebenza kanjani i-WiFi hotspot?
Indawo yomphakathi ye-WiFi isebenza ngokufana nokuxhumeka kwe-Wi-Fi ongakuthola ehhovisi lakho noma ekhaya. Izindawo ze-WiFi zisebenza ngokuba nokuxhumeka kwe-inthanethi futhi zisebenzise ithuluzi elingenantambo elihlukile, ngokwesibonelo ama-routers nama-modem, ukudala ukuxhumana okungenawaya, lapho ungaxhuma khona i-smartphone, ithebhulethi, i-PC, noma enye into.
Ijubane, amandla, ibanga, nezindleko ze-WiFi hotspot zingahluka. Noma kunjalo kumqondo ophelele ngemuva kwe-WiFi hotspot kuyafana nje namanethiwekhi we-WiFi asekhaya, futhi ungaxhumanisa nokusebenzisa i-WiFi hotspot ngokufanayo ungasebenzisa inethiwekhi ye-WiFi yangaphakathi.
Izindawo zokudlela ze-Wi-Fi ze-AlThbo ngokuvamile ziyafana, kunezinhlobo ezithile zezindawo ezishisayo ezitholakalayo, futhi zinokuhluka okumbalwa okucacile.
I-WiFi hotspot yomphakathi
Izindawo ezidla lubi zeWiFi zomphakathi ziyilokho okuvela khona. Izindawo ezidla lubi ikakhulukazi - yize kungenjalo ngaso sonke isikhathi - zikhululekile ukusebenzisa. Izindawo ezifana nezindawo zokudlela ezinhle, umtapo wolwazi womphakathi, izitolo ezidayisa ezitolo, nezinye izinhlangano nezinkampani ezinjalo zinganikeza ukuxhumana kwamahhala kwe-WiFi yomphakathi kwamakhasimende. Emadolobheni ambalwa, ukuphathwa komphakathi noma ama-ISP nawo anganikeza ukuxhumana kwe-WiFi yomphakathi mahhala ezindaweni ezithile. Lokhu kumahhala kakhulu, kusezindaweni ezimbalwa, njengezikhumulo zezindiza namahhotela, udinga ukukhokha ukuze ufinyelele ku-hotspot ye-WiFi yomphakathi.
Izindawo ezidonsa kakhulu ze-WiFi
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezindawo ezidonswayo zeselula. Isibonelo, uyazi ukuthi ungasebenzisa i-iPhone njenge-Wi-Fi hotspot? Okufanayo kulungile kuma-smartphones amakhulu we-Android. Vele uvule lesi sici efonini yakho bese usebenzisa idatha yaso yeselula ekwakheni i-WiFi hotspot. Kamuva, ungaxhumanisa nale hotspot nge-PC noma enye into engafaki idatha yeselula.
Futhi ungathenga izindawo zokuhlala ze-Wi-Fi ezakhelwe injongo ezihloselwe ukushintshela uxhumano lwedatha yeselula lube uxhumano lwe-WiFi olunamandla. Abantu abavakashela umsebenzi kakhulu noma abadinga ukufinyelela njalo kuxhumano oluthembekile lwe-WiFi bangabandakanyeka kwenye yamadivayisi anjalo angathengwa ezinkampanini eziningi zamafoni.
Izindawo ezidonsela kusengaphambilini
Izindawo ezidonsela kusengaphambili ze-WiFi ziyafana nezindawo ezidonsela kuzo zeselula, zisenenani ledatha elingavinjelwe ongalisebenzisa. Ungakhokhela le datha, bese kuthi ngemuva kokuphelelwa yisikhathi, ungathenga enye ngokuzenzakalela. Le yindlela enhle yokuthola i-hotspot yeselula ngaphandle kokubhaliswa kwedatha yeselula okude.
Indlela elula yokuthola i-WiFi hotspot ukuvula i-PC yakho noma iselula bese uqala ukusesha. Ezindaweni eziningi zomphakathi, uzobona ukuthi kunezindawo eziningi ezivulekile, ezivulekile ze-WiFi ongazixhumanisa nazo, mahhala. Ungahle useshe izindawo ezidonsela kuzo ze-WiFi ezinikezwa yi-ISP yakho.
Vikela Inethiwekhi yakho ye-WiFi iyadingeka ngenkathi kukhulunywa ngokugcina abahlaseli nokuvikela idatha yakho.
Ungayivikela Kanjani inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi
Kuya Vikela inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi kuyigcina iphephile kubaduni, kunezinyathelo eziningi okufanele uzithathe:
Into yokuqala nebaluleke kakhulu okufanele uyenze ukuvikela i-Your WiFi Inethiwekhi ukuguqula amagama abasebenzisi namaphasiwedi azenzakalelayo kokunye okuvikelwe okungeziwe.
Abahlinzeki be-Wi-Fi babela ngokuzenzakalela igama lomsebenzisi & ukhiye wokudlula kunethiwekhi futhi abaduni bangavele bathole lo khiye wokungena ozenzakalelayo online. Uma bethola ukufinyelela kunethiwekhi, bangaguqula ukhiye wokungena kunoma yini abayifunayo, bakhiye umthengisi ngaphandle bese bethatha inethiwekhi.
Ukufaka amagama abasebenzisi namaphasiwedi kwenza kube nzima ngokwengeziwe kubahlaseli ukuthola ukuthi i-Wi-Fi kabani futhi bakwazi ukufinyelela kunethiwekhi. Abaduni banamagajethi obuchwepheshe obuphezulu bokuhlola amakhulukhulu okhiye wokungena kanye nokuhlelwa kwamagama abasebenzisi, ngakho-ke kubalulekile ukukhetha iphasiwedi enamandla ehlanganisa izimpawu, izinhlamvu, nezinombolo, ukwenza kube nzima ukunquma.
2. Shintsha Inethiwekhi Yokubethela Okungenantambo
Ukubethela kungenye yezindlela ezisebenza kahle kakhulu zokuvikela idatha yenethiwekhi yakho. Ukubethela kusebenza ngokuxuba idatha yakho noma okuqukethwe umlayezo ukuze kunganqunyulwa ngabaduni.
3. Usebenzisa i-Virtual Private Network VPN
I-Virtual Private Network iyinethiwekhi ekuvumela ukuthi uxhume ngenethiwekhi engabhalwanga, engaphephile ngendlela yomuntu siqu. I-VPN ibethela idatha yakho ukuze isigebengu singakwazi ukuxhumana ngalokho okwenzayo online noma lapho ubekwe khona. Ngaphezu kwedeskithophu, ingasetshenziswa futhi kwi-laptop, ifoni noma ithebhulethi. Kanye nedeskithophu, kungasetshenziswa ngisho nasocingweni, kwi-laptop, noma kuthebhulethi.
4. Cisha inethiwekhi ye-Wi-Fi ngenkathi ungekho ekhaya
Kubukeka kulula kepha enye yezindlela ezilula zokuvikela amanethiwekhi wakho wasekhaya ekuhlaselweni ukuyicisha uma ungekho ekhaya. Inethiwekhi yakho ye-Wi-Fi ayidingi ukuthi isebenze amahora angama-24 ngosuku, izinsuku ezingu-7 ngeviki. Ukucisha i-Wi-Fi yakho ngenkathi ungekho ekhaya kunciphisa amathuba okuba abaduni abanobuhlakani abazama ukungena kunethiwekhi yakho ngenkathi ungekho ekhaya.
5. Gcina isoftware yomzila ivuselelwe
Isoftware ye-Wi-Fi kufanele yenziwe yesimanje ukuvikela ukuphepha kwenethiwekhi. Amafemu ama-routers njenganoma yiluphi olunye uhlobo lwesoftware angafaka ukuvezwa lapho kubaduni bezimisele ukukusebenzisa. Ama-routers amaningi ngeke akwazi ukukhetha ukuvuselelwa okuzenzakalelayo ngakho-ke uzodinga ukuvuselela isoftware ngokomzimba ukuze uqiniseke ukuthi inethiwekhi yakho ivikelekile.
6. Sebenzisa Izicishamlilo
Ama-routers amakhulu we-W-Fi aqukethe i-firewall yenethiwekhi eyakhelwe ngaphakathi evikela amanethiwekhi we-broadband futhi ihlole noma yikuphi ukuhlaselwa kwenethiwekhi kusuka kuma-stalkers. Bazokwazi ngisho nokumiswa ngakho-ke kubalulekile ukuhlola ukuthi i-firewall yomzila wakho ivuliwe ukwengeza ungqimba lokuvikela olwengeziwe ekuphepheni kwakho.
7. Ukuhlunga kwemvume yekheli le-MAC
Ama-routers amaningi we-broadband afaka okokuhlonza okukhethekile okwaziwa njengekheli elibonakalayo leMedia Access Control (MAC). Lokhu kuhlose ukuqinisa ezokuphepha ngokubheka inani lamagajethi angahle axhumeke kumanethiwekhi.
Izindlela ezi-6 eziphezulu zokubhekana neSlow Internet Connection
Akukho okucasula njengokuthi ube nesixhumanisi esihle se-Wi-Fi noma i-Ethernet, noma kunjalo isivinini se-inthanethi esisheshayo. Ngezansi kuneminye imibono yokuxazulula inkinga, ukulungisa, ukumane unqobe ijubane le-inthanethi elihamba kancane.
1. Hlola uhlelo lwakho lwe-inthanethi
Ngezinye izikhathi, ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi kuhamba kancane njengoba ukhokhela i-crappy internet. Ngena ngemvume kuwebhusayithi yomhlinzeki wakho bese uthola ukuthi unaluphi uhlelo. Manje vakashela i-fast.com noma amanye amasayithi ahlukile bese wenza isivinini. Indlela engcono yokusheshisa i-inthanethi yakho ukuthuthukisa uhlelo lwakho.
2. Nikeza i-hardware yakho ukulungiswa kwendawo yonke
Bheka i-router & modem yakho bese wenza ukusetha kabusha okusheshayo bese ubona ukuthi lokho kuyasebenza. Hlola amanye ama-PC asekhaya lakho ukubona ukuthi ngabe internet kuhamba kancane. Uma udaba lwenzeka kuphela kwi-PC eyodwa, inkinga ukuthi leyo PC, hhayi imodemu yakho noma i-router yakho.
3. Lungisa izimpawu zakho ze-Wi-Fi
Ukukhuluma nge-Wi-Fi, ungahle uqaphele ukuthi i-inthanethi yakho ne-router kulungile; namanje izimpawu zakho ezingenantambo zibuthakathaka. Lokhu kungaveza ukwedlula-okuhamba kancane-noma, kokuphansi, umuzwa wokudlulisa amehlo ogcwele dormancy. Ngemuva kwalokho, ungahle udinge ukuhambisa, ukulungisa, nokukhulisa i-router yakho ngamasu athile.
4. Cisha noma ukhawulele izinhlelo zokusebenza zomkhawulokudonsa
Uma ngabe i-hardware ibonakala isebenza kahle, bheka ukuthi ngabe kukhona ezinye izinhlelo ezengeziwe ezilawula ukuxhumana. Isibonelo, uma ulanda amafayela ngeBitTorrent, ukuphequlula iwebhu okujwayelekile kuzohamba kancane. Kufanele uzame nokufaka izandiso ezinjenge-Privacy Badger ne-AdBlock Plus ezizovimba ezimbalwa zezikhangiso, amavidiyo nezithombe ezigqwayayo ezilawula umkhawulokudonsa, ezingadla ukuxhumeka kwakho.
5. Sebenzisa iseva ye-DNS yakamuva
Ngenkathi ubhala ikheli kusiphequluli, i-PC yakho isebenzisa ngandlela thile eyaziwa njenge-DNS ukusesha nokuhumusha lokho kukheli le-IP eliphendula nge-PC. Ngezinye izikhathi, noma kunjalo, amaseva i-PC yakho ayisebenzisayo ukusesha lolo lwazi lungaba nezinkinga, noma luye phansi ngokuphelele. Ngenhlanhla, unokukhetha okuningi okusheshayo, kwamahhala ongakusebenzisa, okufana ne-Cloud flare noma i-Google DNS.
4. Thinta umphakeli wakho we-inthanethi
Uma usuthole zonke izinyathelo ezibalulekile zokuxazulula inkinga futhi i-inthanethi yakho isahamba kancane, sekuyisikhathi sokuxhumana nomhlinzeki wakho we-inthanethi futhi ubuke ukuthi inkinga isiphelile yini. Qaphela: ungacabangi nje ukuthi benze noma yini engalungile futhi uphathe impendulo yakho yamakhasimende akho ngokubhekisisa. Ngokuqinisekile uzothola imiphumela emihle ikakhulukazi uma bebekunikeza isivinini esingalungile sonke lesi sikhathi.
5. Thuthukisa iwebhu ngokuxhumeka okuhamba kancane
Ukuthungatha inkinga ku-intanethi ehamba kancane kungathatha isikhathi, futhi okwamanje usadinga ukuphequlula. Noma mhlawumbe usekhefi noma endizeni, futhi akukho ongakwenza ngejubane elihamba kancane. Ngakho-ke, sekuyisikhathi sokukhulisa iwebhu yakho ngokuxhumeka okuhamba kancane.
6. Sebenza ngobuchule
Uma kufanele uthole umsebenzi uphothulwe ekuxhumekeni okuhamba kancane, ungahle udinge ukukhetha imisebenzi ngokuhlukile kunokuthi ngabe i-inthanethi ibiphezulu kakhulu. Hlukanisa imisebenzi yakho ibe yi-bandwidth-light kanye ne-bandwidth-esindayo. Uma ukuxhumo oluhamba kancane yenza okulula kwenziwe futhi uqoqe yonke imisebenzi esindayo ye-bandwidth ngokuhlanganyela ukuze ukwazi ukuyenza uma usuthole uxhumano olusheshayo.